Thursday, 01 October 2020 09:50
ပညာရပ်တစ်ခုကို သင်ယူတဲ့နေရာမှာ ဆရာက အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ ဆရာကကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ သင်ကြားမှုမှာ နှောင့်နှေးရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ဆရာတစ်ယောက်လိုက်ရှာရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒီအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ဆရာများစွာကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မယ့် website လေးတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သင် sayar.com.mm ဆိုတဲ့ website လေးကို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
Sayar.com.mm ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဆရာရှာဖွေရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေလို့ရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကလည်း များပြားပါတယ်။
သင်က ဘာသာစကားတစ်မျိုးမျိုးကို သင်ယူချင်တာလား???
သင်က လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းတွေ လက်ရှိခေတ်စားလာတဲ့ digital marketing ပညာရပ်တွေကို သင်ယူချင်တာလား???
အိုင်တီနဲ့ပက်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး သင်ယူချင်တာလား???
ဘာသာစကားသင်ကြားဖို့ ဆရာရှာနေတယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ပြင်သစ်ကစလို့ ဟင်ဒီ နဲ့ သက္ကတဘာသာတွေထိ ရှိပါတယ်။ စီးပွါးရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ Business Administration, Accounting စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကိုလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ Programming languages တွေသင်ယူနိုင်တဲ့အပြင် ဂီတနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကိုလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားအရွယ် လူငယ်တွေအတွက် အထက်တန်းပညာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဇီဝဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ စတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာတွေကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံပညာအတွက် သိုင်းပြောင်းပြန်၊ ဗန်တို ပညာရပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဘာသာရပ်ပေါင်း ၉၀ကျော်နဲ့ ဆရာပေါင်း ၁၁၀၀ ကျော်ကို website ထဲမှာ ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။
Website ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်သင်ကြားလိုတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့အဆင့်၊ ကိုယ်သင်ကြားမယ့်မြို့ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ သင်ကြားပေးမယ့် ဆရာတွေပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲက ဆရာတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ ပညာရေး၊ ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာတွေကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုပဲ register လုပ်လိုက်ပါ။
ပညာရပ္တစ္ခုကို သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ ဆရာက အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ တခါတေလမွာ ဆရာကေကာင္းေပမယ့္ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့အခါ သင္ၾကားမႈမွာ ေနွာင့္ေနွးရတာေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္း ဆရာတစ္ေယာက္လိုက္ရွာရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒီအတြက္ အြန္လိုင္းကေန ဆရာမ်ားစြာကို အလြယ္တကူရွာေဖြနိုင္မယ့္ website ေလးတစ္ခုကို ရွာေဖြေနပါသလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင္ sayar.com.mm ဆိုတဲ့ website ေလးကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ လိုေနပါျပီ။
Sayar.com.mm ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး အခမဲ့ အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ ဆရာရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေဖြလို႔ရတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကလည္း မ်ားျပားပါတယ္။
သင္က ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ယူခ်င္တာလား???
သင္က လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ လက္ရွိေခတ္စားလာတဲ့ digital marketing ပညာရပ္ေတြကို သင္ယူခ်င္တာလား???
အိုင္တီနဲ႕ပက္သက္တဲ့ပညာရပ္ေတြကို စိတ္ပါဝင္စားျပီး သင္ယူခ်င္တာလား???
ဘာသာစကားသင္ၾကားဖို႔ ဆရာရွာေနတယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္ကစလို႔ ဟင္ဒီ နဲ႕ သကၠတဘာသာေတြထိ ရွိပါတယ္။ စီးပြါးေရးနဲ႕ပက္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ Business Administration, Accounting စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း သင္ယူနိုင္ပါတယ္။ Programming languages ေတြသင္ယူနိုင္တဲ့အျပင္ ဂီတနဲ႕ပက္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း သင္ယူနိုင္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္ေတြအတြက္ အထက္တန္းပညာေရးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ဇီဝေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ စတဲ့ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာေတြကုိလည္း ရွာေဖြနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခံပညာအတြက္ သိုင္းေျပာငး္ျပန္၊ ဗန္တို ပညာရပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၉၀ေက်ာ္နဲ႕ ဆရာေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ website ထဲမွာ ရွာေဖြလို႔ရပါတယ္။
Website ထဲဝင္လိုက္တာနဲ႕ ကိုယ္သင္ၾကားလိုတဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႕အဆင့္၊ ကိုယ္သင္ၾကားမယ့္ျမိဳ႕ကို ရိုက္ထည့္လိုက္တဲ့အခါ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာေတြေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲက ဆရာေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ရမယ့္ လိပ္စာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ကိုယ္တိုင္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုပဲ register လုပ္လုိက္ပါ။
Thursday, 28 May 2020 12:24
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂျင်းထည့်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။
Friday, 13 March 2020 10:56
ယနေ့ခေတ်မှာ ဘွဲ့ရခါစလူငယ်တွေသာမက လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတော်တော်များများတွေမှာ တွေ့ရတဲ့အချက်တစ်ချက်က CV ရေးသားပုံရေးသားနည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးပုံရေးနည်းလိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 06 March 2020 16:14
Self-study ဆိုတဲ့စကားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်ကြီးမရင်းနှီးကြသေးပါဘူး။ Self-study ကောင်းကောင်းလုပ်နေကြသူတစ်ချို့တော့ ရှိပေမယ့် ဒါလူနည်းစုပါပဲ။
Thursday, 05 March 2020 10:17
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Digital Marketing ဟာ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ လိုအပ်နေပြီး လူတော်တော်များများကလည်း Digital Marketing ကိုလေ့လာနေကြပါပြီ။ Digital Marketing ကို ကောင်းစွာအသုံးချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများလည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Digital Marketing လေ့လာဖို့ Website ကောင်း (၁၀) ခု ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၁။ Content Marketing Institute (https://contentmarketinginstitute.com/)
Digital Marketing, Content Marketing နှင့် ပတ်သက်သော နေ့စဉ်သတင်းများ လေ့လာနိုင်မည့် Website ဖြစ်သည်။
၂။ Contently (https://contently.com)
Content Marketing Strategy ချမှတ်နည်းများကို တစ်နေရာထဲတွင် စုံလင်စွာလေ့လာနိုင်မည့် Website ဖြစ်သည်။
၃။ HubSpot (https://blog.hubspot.com/)
Content Marketing,Marketing တို့ လေ့လာရန်အတွက် HubSpot သည်လည်း အကောင်းဆုံး Website များထဲတွင် ပါဝင်သည်။
၄။ MOZ – The Moz Blog (https://moz.com/blog)
SEO Beginner များအတွက် လေ့လာရန်သင့်တော်သော Website တစ်ခုဖြစ်သည်။
၅။ Four Dots (https://fourdots.com/)
SEO, link building, digital and content marketing တို့ကို စုံလင်စွာ လေ့လာနိုင်မည့် Website တစ်ခုဖြစ်သည်။
၆။ Neil Patel (https://neilpatel.com/blog/)
Digital Marketing လေ့လာနေသူများအတွက် တစ်ဆင့်ချင်းစီ သင်ကြားပေးသော Website ဖြစ်သည်။
၇။ Social Media Examiner (https://www.socialmediaexaminer.com/)
Video Guide, Infographic များဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်စွာ လေ့လာနိုင်မည့် Website တစ်ခုဖြစ်သည်။
၈။ Social Media Explorer (https://socialmediaexplorer.com/)
Digital Marketing Tips များဖြင့် လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်မည့် Website တစ်ခုဖြစ်သည်။
၉။ Buffer (https://buffer.com/resources/)
ယနေ့ Digital Marketing အကြောင်းကို up to date လေ့လာနိုင်မည့် Website တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၀။ Google Inside AdWords (https://blog.google/products/ads/)
Google ၏ တရားဝင် Blog ဖြစ်ပြီး Google Advertising Program များ၊ Update သတင်းများကို လေ့လာနိုင်မည့် နေရာဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးသော Guide ဆရာ၊ ဆရာမများ >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-496.html
ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ Digital Marketing ဟာ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ လိုအပ္ေနၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း Digital Marketing ကိုေလ့လာေနၾကပါၿပီ။ Digital Marketing ကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ Digital Marketing ေလ့လာဖို႔ Website ေကာင္း (၁၀) ခု ကို တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
Digital Marketing, Content Marketing ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား ေလ့လာႏိုင္မည့္ Website ျဖစ္သည္။
Content Marketing Strategy ခ်မွတ္နည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ စုံလင္စြာေလ့လာႏိုင္မည့္ Website ျဖစ္သည္။
Content Marketing,Marketing တို႔ ေလ့လာရန္အတြက္ HubSpot သည္လည္း အေကာင္းဆုံး Website မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။
SEO Beginner မ်ားအတြက္ ေလ့လာရန္သင့္ေတာ္ေသာ Website တစ္ခုျဖစ္သည္။
SEO, link building, digital and content marketing တို႔ကို စုံလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္မည့္ Website တစ္ခုျဖစ္သည္။
Digital Marketing ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ သင္ၾကားေပးေသာ Website ျဖစ္သည္။
Video Guide, Infographic မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္မည့္ Website တစ္ခုျဖစ္သည္။
Digital Marketing Tips မ်ားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္မည့္ Website တစ္ခုျဖစ္သည္။
ယေန႔ Digital Marketing အေၾကာင္းကို up to date ေလ့လာႏိုင္မည့္ Website တစ္ခုျဖစ္သည္။
Google ၏ တရားဝင္ Blog ျဖစ္ၿပီး Google Advertising Program မ်ား၊ Update သတင္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေသာ Guide ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-496.html
Sources : SEOM Myanmar
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြောင်းလဲမည့် Grade-10 ပညာရေးစနစ်သစ်အတွက် ကျောင်းသား/သူလူကြီးမိဘများ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေကို သိရှိထားသင့်ပါတယ်။
Wednesday, 04 March 2020 14:51
“ဘာသာစကားေလ့လာတဲ့ အခါ သီခ်င္းေတြကို အသံုးခ်ျပီး ေလ့လာဖို႕အတြက္ အခ်က္ (၆ ) ခ်က္”
ဒီနေ့မှာတော့ ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာဖို့ နဲ့ ဘာသာစကားတွေရဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သီချင်းတွေကနေတစ်ဆင့် လေ့လာလို့ရမယ့် အချက်တစ်ချို့နဲ့ Activities တချို့ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
"ဝန္ထမ္းေကာင္း (ျမင္သာတဲ့ဝန္ထမ္း) တစ္ေယာက္ယာက္ျဖစ္ဖို႕"
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အများနဲ့မတူဘဲ လူတိုင်းအမြင်ကြည်ပြီးချီးကျူးရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။